Xaaska Madaxweynihii Haiti Oo Fariin Ka Soo Dirtay Isbitaalka – Heemaal News Network
Xaaska Madaxweynihii Haiti Oo Fariin Ka Soo Dirtay Isbitaalka
Haweeneyda dhaawaca ah ee ahayd xaaska madaxweynihii Haiti ayaa ka sheekeysay qaabkii ay seygeeda “rasaas” ugu fureen rag hubeysan oo soo weeraray ka dib markii ay ugu soo dhaceen gurigi ay deganaayeen.
Martine Moïse waxay sheegtay in weerarku uu u dhacay si deg deg ah, seygeeda Jovenel – na uu awoodi waayey inuu xitaa “hal eray yiraahdo”.
Madaxweyne Moïse waxaa la dilay 7 julay, iyadoo dilkiisa lagu eedeeyay 28 calooshood u shaqeystayaal ajnabi ah.
Mrs Moïse ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerarka, islamarkana waxaa loo duuliyay Miami si loogu soo daweeyo.
Sabtidii, waxay farriin cod ah soo dhigtay boggeeda Twitter-ka iyada oo ku dhaaraneysa inay sii wadi doono shaqadii uu waday. Tiro dad ah ayaa xaqiijiyay in codkaasi uu yahay midka marwada madaxweynaha.
“muddo ilbiriqsi ah, ayay calooshood u shaqeystayaal gurigeyga soo galeen, waxayna ninkayga ku rideen rasaas,” ayay ku tiri Mrs Moïse codka ay so duubtay, iyada oo ka sheekeyneysa xilligii kuwa weerarka soo qaaday ay dileen ninkeeda.
“Ficilkani ma lahan magac sababtoo ah waa inaad noqotaa dambiile aan xad lahayn marka aad dilayso madaxweyne sida Jovenel Moïse, adigoon xitaa fursad u siinin inuu hal eray dhaho,” ayay sii raacisay.
Waxay soo sheegtay in ninkeeda loo bartilmaameedsaday sababo siyaasadeed awgood – gaar ahaan, iyadoo xustay afti loo qaado isbeddelka dastuurka ay siin laheyd madaxweynaha awood dheeri ah.
Dadka aan la magacaabin, ayay tiri, “waxay doonayaan inay dilaan riyada madaxweynaha”.
“Waan ooyayaa, waa run, laakiin ma oggolaan karno in waddanku ka lumo waddadii uu hayay,” ayay raacisay. “Ma ogolaan karno in dhiiga Madaxweynaha Jovenel Moïse, ninkeyga, madaxweynaheena aan aadka u ujecleyn oo isna na jeclaa, uu u daato wax aan micno lahayn.”
Warar kasoo Kordhay Xiisad ka Taagnayd Deegaanka Ceella-helay Ee Lughaya Oo Cuqaal loo Xiray.
Message supposedly from Martine Moïse appears on Twitter account reportedly hacked
Daahir Riyaale Oo ka Hadlay Doorashadii Shir-gudoonka.
Heemaall August 3, 2021 August 3, 2021
CXDS Oo Burburiyey Saldhigyo Ay Lahaayeen Maleeshiyadda Alshabaab
Ninkii Gabar-yar ka Xaday Gurigeeda Hargaysa Oo lasoo Qabtay.